ukujongana: gcina i-350 yeedola xa uthenga i-samsung galaxy s8 / s8 + okanye uqaphele i-8 ngokuthenga okungcono
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Idili: Gcina i-350 yeedola xa uthenga i-Samsung Galaxy S8 / S8 + okanye iNqaku 8 kwi-Best Buy
Ukuthenga okungcono kunesithembiso esihle kwiiflegi zeSamsung, ezinokuthi ziphuculwe ngoLwesihlanu omnyama. Okwangoku, umthengisi ubanga ukuba izivumelwano zine & ldquo;Amaxabiso amnyama ngoLwesihlanu, & rdquo; Kungangumbono olungileyo ukuba ubaqwalasele ngaphambi kokuba baphelelwe lixesha.
Ngokusisiseko, wena kunye ne-apos; uza kugcina i-350 yeedola xa uthenga i-Samsung Galaxy S8, i-Galaxy S8 + okanye i-Galaxy Note 8 kwi-Best Buy. Isivumelwano sifuna ukuba abathengi basebenzise nasiphi na isixhobo esithengiweyo ngezavenge zenyanga zeVerizon okanye iSprint.
IVerizon ibonelela ngeeflegi ezintathu zeSamsung nge- $ 15.42 / ngenyanga, $ 19.41 / ngenyanga, kunye ne- $ 24.41 / ngenyanga, ngokwahlukeneyo, kangangeenyanga ezingama-24. Kwelinye icala, i-Sprint inazo zokubamba i $ 16.66 / inyanga, $ 20.83 / inyanga kunye ne- $ 25.41 / ngenyanga, ngokwahlukeneyo. Unokufumana ngaphezulu i-50% isaphulelo nokuba sesinye kwisithathu ngomsebenzi omtsha wokusebenza kweSprint Flex Lease.
I-AT & T inesivumelwano esinomdla kakhulu, njengoko ophetheyo enikezela simahla Galaxy S8 xa uthenga i-smartphone ye-Galaxy. Gcina ukhumbula ukuba ubuncinci kubo kufuneka babe kumgca omtsha.
Okokugqibela, ii-smartphones zeGalaxy evulekileyo ezilungele ukuthengiselana zinokubakho kwi-Samsung kunye neapos yezezimali yeenyanga ezingama-24 xa usebenzisa ikhadi lam lekhadi lokuthenga kwam. Ngaphezulu koko, unokukhetha kwimibala emine kubandakanya Eyona nto ithengiweyo ikhethekileyo kwi-coral blue (Galaxy S8 / S8 +) kunye I-Deepsea eluhlaza okwesibhakabhaka (Galaxy Note 8).
umthombo: Eyona Ntengiso
Umahluko phakathi kobukhali nokuphambili
isoftware eyakhiweyo yahanjiswa ngamaqhekeza yaziwa njenge
I-Samsung Galaxy Qaphela i-9 vs Apple iPhone X
Uyilungisa njani i-Samsung Galaxy Qaphela 4 & apos; s iingxaki zolawulo lwe-RAM [ingcambu]
I-Selenium-Ungayibuyisela njani iiKuki kwiWindows Window entsha
Igolide epinki i-Samsung Galaxy S7 kunye ne-S7 edge ngoku iyafumaneka eKorea, iza kungekudala kwezinye iimarike
Ezona zinto zilungileyo ze-iPhone 12 zeMagSafe